यसरी मधेस भवन छाडे पदमुक्त प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराज
जनकपुरधाम : प्रदेश २ प्रमुखबाट पदमुक्त भएका डा. राजेश अहिराज प्रदेश २ प्रमुख कार्यालयबाट बाहिरएका छन् । पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि आफुले गरेका काम र कार्यसम्पादन तथा प्रदेश २ का विषयमा आफनो धारणा राख्दै डा.अहिराज प्रदेश २ कार्यालय छाडेका छन् । निजि गाडीमा उनी बाहिरएका छन् ।
गत २०७७ फागुन ७ गते शुक्रवार तत्कालिन केपि शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रदेश २ प्रमुख नियुक्त भएका डा. अहिराज जाँँदाजाँदै प्रदेश २ अभाव, अपराध र अतिवादको चपेटामा परेको दावी गरेका छन् । उनले प्रदेश २ मा विभेद हटाउछु भन्नेहरुबाटै विभेद भइरहेको समेत बताएका छन् ।
पदबाट मुक्त भइसकेपछि प्रदेश प्रमुखले पाउने राज्यको सुरक्षा सहितको सेवा सुविधा आफु नलिने र त्यो सुविधा जनताको लागि हुनु पर्ने बताएका छन् । शिरमा देश र मनमा मधेश राखेर आफु संविधान अनुसार काम गरेको र अगामि दिनमा समेत विभिन्न तवरबाट प्रदेशवासीको सेवामा रहने उनको भनाई थियो ।